Institut Malgache des VAccins VEtérinaires | Commune Rural Sabotsy Namehana
Notanterahana ny Alarobia 08 Desambra 2021 ny fanaovan-tsonia ny fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny Institut Malgache des VAccins VEtérinaires (IMVAVET) sy ny Kaominina Sabotsy Namehana, izay miompana indrindra amin’ny fanaovana vakisiny ny akoho amam-borona. Izany no natao dia mba ahafahana manolo-tanana sy manampy ireo tantsaha misehatra amin’ny fiompiana, ary ho fanatsarana ny fiompiana ka ho lasa fidiram-bola maharitra ho an’ny mpiompy.
Nitohy ny 09 Desambra 2021 ny fanomezana fampiofanana ireo solotena isam-pokontany mikasika ny fanaovam-bakisiny. Ary nofaranana tamin’ny fampiharana mivantana tao amin’ny Fokontany Andrefantsena izany, ka akoho amam-borona miisa 50 no natao tamin’io fotoana io.
Aorian’izao dia hiparitana hiasa eny anivon’ny Fokontany 17 mandrafitra ny Kaominina Sabotsy Namehana ireo solotena ireo hanao vakisiny ireo akoho amam-borona ary hizara ny fahaiza-manao azon’izy ireo amin’ireo mpiompy eny anivon’ny Fokontany.